Self-tsitsi Ball mabheyaringi - China Ningbo Shenhe Kupa
The rinofarirwa kupfuura kuzvipira tsitsi bhora mabheyaringi ndivo kaviri mutsara kuzvipira tsitsi bhora mabheyaringi, inoitwa chimwe mhete chokunze kuti aiva guru idenderedzwa paburi Raceway, mumwe rin'i yomukati grooves miviri, vaviri bhora rinovira maviri mumakeji. Kukosha mabheyaringi izvi hazvidi tsitsi basa kuti aigona anobvumawo misalignment vaviri namasanhu uye mugodhi vachikotama Kutsauka.
Double (mhete yomukati)
Single (wokunze mhete)
Open Self-tsitsi Ball mabheyaringi
Kubereka No. muganhu encombrements Basic mutoro ratings Kuderedza aimhanya uremu
D D B Kr VaK girisi mafuta
TN1, M mm N RPM d
Self-tsitsi Ball mabheyaringi pamwe 2RS Zvisimbiso
D D B Kr VaK
Cylindrical 10000 girisi
The rinofarirwa kupfuura kuzvipira tsitsi bhora mabheyaringi ndivo kaviri mutsara kuzvipira tsitsi bhora mabheyaringi, inoitwa chimwe mhete chokunze kuti aiva guru idenderedzwa paburi Raceway, mumwe rin'i yomukati grooves miviri, vaviri bhora rinovira maviri mumakeji. Kukosha mabheyaringi izvi hazvidi tsitsi basa kuti aigona anobvumawo misalignment vaviri namasanhu uye mugodhi vachikotama Kutsauka. Asi vaifanira bvumidzwa yorusvingo kutsauka pakati akabatana kuti mhete yomukati uye akabatana kuti mhete chokunze havafaniri kupfuura 3 dhigirii.
The kuzvipira tsitsi bhora mabheyaringi anoshandiswa apo pane TOUR; mutoro chete kana TOUR mutoro pamwe zviduku axial mutoro. Kazhinji mabheyaringi izvi hazvina kushandiswa apo ikoko axial mutoro chete, nekuti ipapo chete row balls kutakura axial mutoro kuti nyaya.
Kune dzimwe mhando STRUCTURAL mhando, akadai: K mhando unozvipa tsitsi bhora mabheyaringi withe tapered dzikapupurira; Self-tsitsi bhora mabheyaringi pamwe tapered dzikapupurira uye adapteri ruoko kana kurega ruoko; Rakatanga mhete yomukati; Self-tsitsi bhora mabheyaringi pamwe shinda holed kuti tightening sikuruu kudivi rimwe mhete rwomukati.
SHB kunyanya zvigadzirwa hayo kuzvipira tsitsi bhora akatakura uye kuzvipira tsitsi bhora akatakura pamwe 2RS zvisimbiso rwomukati dhayamita pakati 5 uye 40. Maererano zvinodiwa inodzidzisa, SHB kubereka okuzvifunga tsitsi bhora aitaridzika yemhando nemazvo ( P0, P6, P5), mapoka Clearance siyana, inokosha vibration uye ruzha zvinodiwa (Z1, Z2 kana V1, V2).
Previous: Four Point Contact Ball mabheyaringi
Next: 67 Series Deep Groove Ball mabheyaringi
tsitsi Ball Kubereka
Type All kwokutsungirira
Auto General Used Kupa
Auto Self-tsitsi Ball mabheyaringi
Automobile nemazvo Kupa
Car Wheel mabheyaringi
Custom Designed mabheyaringi
kuvimbwa Performance Kupa
Double Row Kubereka Chisimbiso
Double Row Special Kupa
Fishing Reel Kubereka
General Electric Motor mabheyaringi
Go Kart Parts mabheyaringi
Machine Danho chokurukisa Kupa
Mechanical Parts Kubereka
Nsk tsitsi Ball Muchibereka
Open Type Kupa
Rubber chisimbiso Kupa
Zviine chisimbiso Kupa
Self-tsitsi Ball Muchibereka
SKF Self-tsitsi Ball Kupa
Slim Kupa 6914
Slim Series mabheyaringi
Small Motor mabheyaringi
Super nemazvo Kupa
Mutete Chikamu Muchibereka
Mutete namasvingo Kupa
Tr ansmission Kupa
Non-mureza Ball mabheyaringi